ကျေးဇူးပြု. pre-အလို့ငှာ - စုံထောက် Crow အဘိဓါန်-နယူးယောက်, စုံထောက် Crow အဘိဓါန်-နယူးယောက်၏နယူးယောက်ရောဘတ်ရဲအရာရှိက AUTHOR, နယူးယောက်
လိုင်းပေါ်စုံထောက် Crow အဘိဓါန်-နယူးယောက်, New York ကကြိုတင်မှာယူပါ။ ဒါပေါ်မှာသင့်ရှိသူငယ်ချင်းများကိုမိတ်ဆွေများနှင့်ပြောပြပါ။ ဤစာအုပ်သည်ဂန္အပိုင်းသို့သွားပါလိမ့်မယ်။ - မိုက်ကယ် Terrence ထုတ်ဝေရေး
ကျေးဇူးပြု. , Pre-အလို့ငှာစုံထောက် Crow အဘိဓါန်-နယူးယောက်, New York ကအွန်လိုင်း။ စာအုပ်နှင့်၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများကအကြောင်းကိုဒါပေါ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုပြောပြပါ။ ဤစာအုပ်သည်ဂန္အပိုင်းသို့သွားပါလိမ့်မယ်။ ကလေးတိုင်းတဦးတည်းချင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးပြု. , အမိန့်စုံထောက် Crow အဘိဓါန်-နယူးယောက်, New York က
အဲဒီနှစျခု Twitter account ်တိုက်ပါအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်တစ်ဦးကကြီးစွာသောနေ့၌ဖူး https://twitter.com/SherriffBook https://twitter.com/Lloyd8754Rob
ရောဘတ်ရဲအရာရှိစုံထောက် Crow အဘိဓါန်-New York ကရေးသားသူ, New York ကမကြာခင်မှာပဲလာ - စုံထောက် Crow အဘိဓါန်-နယူးယောက်, ရောဘတ်ရဲအရာရှိစုံထောက် Crow အဘိဓါန်-နယူးယောက်နေဖြင့်နယူးယောက်, New York ကရောဘတ်ရဲအရာရှိအားဖြင့်အသစ်သောစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ အပိုင်းအဆိုးမြင်အန္တရာယ် Thriller, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Fantasy, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစားထိုးစရာသမိုင်းဟာကမ္ဘာ့စုံထောက်များ၏ Crow အဘိဓါန်အမှတ်ရစရာများနှင့်ဖြစ်မည်ဇာတ်ကောင်တစ်အိမ်ရှင်တို့ပါဝင်သည်။ ဇာတ်လမ်းက New York ရဲ့ယုတ်လမ်းများနှင့်မြေအောက်ကတုတ်ကျင်းများနှင့် humanoid စက်ရုပ်အတွက်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဘဝတွေကိုမြေကြီးတပြင်လမ်းလျှောက်တဲ့အနာဂတ်အပေါ်အရပျကိုကြာပါတယ်။ ကျနော်တို့သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်, သမိုင်းဆိုင်ရာတကယ်တော့နှင့်သူမ၏ nemesis ဗိုလ်ကြီး Neira နှင့် femme fatal သူခိုးမင်းသမီး Blackie နှင့်အတူစုံထောက် Crow အဘိဓါန်ရဲ့အစစ်တိုက်ပွဲအကြားသည် dynamically shift ။ ယုန်, ကြွက်များ, မျောက်, ဂြိုလ်သား, စက်ရုပ်, အဓိကကြောကျတုံးရဲစတိုင်ဝါဒနှင့် 20 ၏အဓိကကမ္ဘာကအဖြစ်အပျက်များနှင့် 21 ရာစုများကလူနေထူထပ်တဲ့ကမ္ဘာကြီး၌ဤစာအုပ်ပျမ်းမျှဝတ္ထုထက်တစ်ဦးချင်းစီစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပိုပြီးပြုံးရယ်ခြင်းနှင့်အတွေးအခေါ်များရှိပါတယ်။ ငယ်ရွယ်ပြီးဟောင်းနှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ RL Sherriff http://www.robert-sherriff.com/ https://www.facebook.com/robertlloydsherriff871954 robtsherriff871954@gmail.com https://twitter.com/Lloyd8754Rob http://www.robert-sherriff.com / https://www.amazon.co.uk/dp/1912639297/ https://www.imdb.com/user/ur93657913/?ref_=nv_usr_prof_2 https://www.goodreads.com/user/show/87171469 DIRKBELL ၏ -robert-sherriff https://www.fishpond.com.au/Books/Dirkbell-Robert-Sherriff/9781912639342 ရောဘတ် SHERRIFF အာဏာပိုင်များနှင့်ဘယ်သူမှ'S မူလစာမျက်နှာ http://www.amazon.com.au/dp/1912639270/ ရောဘတ် Sherriff တစ်ဆုရစာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်။ DIRKBELL သြစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်'S pm တွင် Literary Award စာအုပ်လေးကို 2019 နှုန်းကိုကြယ်ငါးပွင် ***** ထဲသို့ဝင်
kyaayyjuupyu. pre-aalhoetnghar -  hconehtout Crow  aabhidharan- nayuuyout,  hconehtout Crow  aabhidharan- nayuu youteat nayuuyout rawbhaat rellaararshik AUTHOR, nayuuyout
mitekaal Terrence htotewayrayy
line paw hconehtout Crow  aabhidharan- nayuuyout, New York  k kyaotain mhar yuu par .  dar pawmhar sang shi suungaalhkyinnmyarr ko mateswaymyarr nhaint pyawwpyapar .  i hcaraote sai gan aapine shoet swarr par lain maal . - mitekaal Terrence htotewayrayy
hconehtout Crow  aabhidharan- nayuu youteatrawbhaat Sherriff  aarbhawnayuuyout
kyaayyjuupyu. , Pre- aalhoetnghar hconehtout Crow  aabhidharan- nayuuyout, New York  k awanline .  hcaraote nhaint ၎innthoeteat mateswaymyarr k aakyaunggko dar pawtwin saineat mateswaymyarr ko pyawwpyapar .  i hcaraote sai gan aapine shoet swarr par lain maal .  kalayy tine t u taee hkyin par lain maal .  kyaayyjuupyu. , amein hconehtout Crow  aabhidharan- nayuuyout, New York k
aellde nha hcyahku Twitter account   tite par aalwan kyaayyjuutainparsai tait u k kyeehcwarsaw naehpuu https://twitter.com/SherriffBook https://twitter.com/Lloyd8754Rob
rawbhaat rellaararshi hconehtout Crow  aabhidharan-New York  k rayysarrsuu, New York  k makyaarhkainmharpelllar -  hconehtout Crow  aabhidharan- nayuuyout,  rawbhaat rellaararshi hconehtout Crow  aabhidharan- nayuuyout nay hpyint nayuuyout, New York  k rawbhaat rellaararshi aarr hpyint aasait saw hcaraote hpyitparsai .  aapine aasoemyinaantararal Thriller, taithcatetaitpine Fantasy,  taithcatetaitpine aahcarrhtoe hcarar samine har kambhar hcone htoutmyarreat Crow  aabhidharan aamhaatrahcarar myarr nhaint hpyitmai jaratkaung taitaain shinthoet parwainsai .  jaratlamk New York  rae yote lammyarr nhaint myayaout k tote kyinn myarrnhaint humanoid  hcaatrote aatwat luusarrmyoenwalaapaw bhawatwayko myay kyee t pyin lamshout tae aanargaataapawar pya ko kyaar partaal .  kyanawthoet sippan hcatekuu yain,  saminesinerar takaaltot nhaintsuumeat nemesis bolkyee Neira nhaint femme fatal  suuhkoemainnsamee Blackie  nhaint aatuu hconehtout Crow  aabhidharan raeahcait titepwal aakyarrsai dynamically shift  .  yone,  kyawatmyarr,  myawwat,  gyaol sarr,  hcaatrote,  aadhik kyawwkyatone rell hcatine wardanhaint 20  eat aadhik kambhar k aahpyitaapyetmyarrnhaint 21  rarhcu myarr k luu nay htuuhtaut tae kambharkyee  i hcaraote pyammyaha wathtu htaat tait u hkyinn hce hcarmyetnhar pawtwin popyee pyuan raal hkyinn nhaint aatwayaahkawmyarr shipartaal .  ngaalrwal pyee haungg nhait u hc lone kyount pyaw mwae par lain maal . RL Sherriff http://www.robert-sherriff.com/ https://www.facebook.com/robertlloydsherriff871954 robtsherriff871954@gmail.com https://twitter.com/Lloyd8754Rob http://www.robert-sherriff.com / https://www.amazon.co.uk/dp/1912639297/ https://www.imdb.com/user/ur93657913/?ref_=nv_usr_prof_2 https://www.goodreads.com/user/show/87171469 DIRKBELL eat -robert-sherriff https://www.fishpond.com.au/Books/Dirkbell-Robert-Sherriff/9781912639342 rawbhaat SHERRIFF  aarnarpinemyarr nhaint bhaalsuumha'S muulahcarmyetnhar http://www.amazon.com.au/dp/1912639270/ rawbhaat Sherriff  tait sur hcarrayysarar hpyitpartaal . DIRKBELL  sya hc tyay lya waankyeehkyaote'S pm twin Literary Award hcaraotelayyko 2019  nhuann ko kyaalngarrpwin *****  htellshoet wain